Maxay la aamuseen Midowga Musharixiinta? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay la aamuseen Midowga Musharixiinta?
Kadib dhowr sano oo ay isku aragti ka ahaayeen arrimo badan oo siyaasadeed, xubnaha Midowga Musharixiinta Soomaaliya, ayaa ugu danbayn u muuqda in ay kala dareereen kadib markii warkooda la waayay in muddo ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Mushariixta Soomaaliya, ayaa u muuqada in ay kala dareereen, kadib markii ku dhawaad labaatan Cisho ayasan soo saarin waraaqihii looga bartay ee ay ku mideysnaayeen, ama xitaa shirarkii jaraa’id ee ka dhici jiray Huteel Jaziira.
Tan iyo markii uu soo if-baxay khilaaf hoose oo ka dhex qarxay Golaha, waxaa yaraaday, dhaqdhaqaaqii Midowga, waxayna inta badan Musharixiintu u baxeen dalka dibaddiiisa, taas oo qudheedu qeyb ka ah in la waayo hadalladii Mucaaradka.
Bishii hore xubno ka tirsan Midowga, ayaa baahiyay waraaq ay sheegeen in ay ka soo baxaday GMM, isla-markaaana lagu xusay in RW Rooble, uu ka shaqeenayay cuuryaaminta doorashooyinka, taas oo abuurtay dood kadib markii qaar ka mid ah Xisbiyada Siyaasadeed ay si dadban u beeniyeen jiritaanka waraaqda.
Hayeeshee, todobaadkii koobaad ee bishaan Juun, ayuu xaalku faraha ka baxay, kadib markii kooxdii Rooble, ku eedeyneysay inuu xagal-daacinayo doorashooyinka, ay si indho la’aan ah u soo dhaweeyeen kala shaandheyn uu Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha ku sameeyay guddigii doorashada ee muranku ka taagnaa.
Xubno sar-sare oo ka tirsan Golaha, ayaa dhankooda, cambaareeyay habka ay Xukuumaddu u kala saartay Guddiga, waxayna sheegeen in ku dhawaad 30 ruux oo ka kala tirsan NISA, shaqaalaha Madaxtooyada iyo taageerayaal ay xubno ka yihiin guddiga, loona baahan yahay in xaafiiska Rooble soo bandhigo habraacii uu u maray kala shaandheynta.
Midowgu kuma dhisneyn aragti siyaasadeed oo mideysan, hayeeshee, waxaa loo yagleelay in Farmaajo iyo kooxdiisa cadaadis lagu saaro, waxaana la aaminsan yahay in ay mar kale is garabsan doonaan, haddii Rooble, ku fashilmo, hirgalinta doorasho la isla oggol yahay.
Waa xaqiiq oo inta badan waxa ay xoogga saarayeen arrimaha Siyaasadda, waxaase la rumeysan yahay in ay jiraan arrimo kale oo u baahan in ay codkoda ku biiriyaan, sida Dhalinyarada ku maqan Eritrea, nadaafad darrada ka jirta Caasimadda, Musuqmaasuqa baahsan ee socda, iyo xilalka faraha badan ee Farmaajo u magaacabayo qaabka qarsoodiga ah.